NYI LYNN SECK 18+ DEN: June 2006
သတိရတဲ့ ကိုယ့်ရဲ့ စိတ်ကို နှစ်သိမ့်ဖို့ရာ
ခဏလေး မေ့ချင်နေတာ ဘာမှ မတတ်နိုင်ပါလား
သီချင်းလေးတစ်ပုဒ် တီးကြည့်ဖို့ကို ကြိုးစားတဲ့အခါ
တစ်ယောက်ထဲ မပြည့်စုံနိုင်တာ သူတော့ မသိနိုင်ပါလား
အမြဲတမ်းပဲ တို့နှစ်ယောက်တွေ့ဆုံ ဒီအချိန်လေးအတိုင်း
အချစ်သီချင်းလေး မင်းကညည်းဆို ဂစ်တာတီးတိုင်း
ကြည်နူးစရာ အကောင်းဆုံး သီချင်းလေးတွေ လွင့်ပျံခဲ့ချိန်များ
ဘယ်ဆီကို လွင့်ပျောက်ပြီလဲ ကာရံညီသီချင်းလေးတွေလည်း
အသက်မဲ့တဲ့ အထီးကျန်ဂစ်တာအခန်းထဲမှာ လဲပြိုနေတာ
မင်းသီချင်းလေး မရှိတော့တဲ့အခါ ပေါင်းစပ်လို့ မရတော့ဘူးကွာ
မင်းသီချင်းလေး မရှိတော့တဲ့အခါ ကိုယ့်ဘဝက အထီးကျန်ဂစ်တာ
သီချင်းလေး ကိုယ့်ဘဝထဲမှာ မရှိတော့ဘူးကွာ
ထာဝရ ပျောက်ကွယ်ပြီလေ အချစ်ဆုံး မင်းပြန်ယူသွား
မင်းနှုတ်ခမ်းက လှပတဲ့ ဒီသီချင်းလေး များစွာ
မျှောလင့် မနက်ဖြန်တွေမှာ ဆုတောင် မပြည့်နိုင်ပါလား
ဟိုတစ်နေ့ညက ဒီသီချင်းကို အထပ်ထပ် အခါခါ နားထောင်ဖြစ်ခဲ့တယ်။
Posted by NLS at 6/30/2006 02:09:00 PM No comments:
Design 2006 Awards [ Click ]
Technorati Tags: Design 2006 Awards
Posted by NLS at 6/30/2006 01:26:00 PM No comments:
Posted by NLS at 6/29/2006 11:27:00 PM No comments:
Tags: Nyi Lynn Seck, Photoshop, Ads
Posted by NLS at 6/29/2006 05:28:00 PM No comments:
Posted by NLS at 6/29/2006 02:16:00 AM No comments:
Posted by NLS at 6/28/2006 11:16:00 PM No comments:
Posted by NLS at 6/28/2006 11:08:00 AM No comments:
Interesting, cool and beautiful photos [Click]
Posted by NLS at 6/27/2006 05:57:00 PM No comments:
Technorati Tags: Nyi Lynn Seck, Myanmar, Funny
Posted by NLS at 6/26/2006 09:56:00 PM No comments:
Posted by NLS at 6/26/2006 08:43:00 PM No comments:
Say "Bullshit" if Gtalk, Yahoo, MSN or whatever was banned. Here you can create your Chat Room! Nobody will track your logs, nobody will interfere when you are chatting, nobody will kock your door " ding ding", nobody will see that you are online. Just giveaname of your chatroom (as you like) and then, give the link to your baby, honey, sweetie, darling, heart, etc. How cool! Some more? If you two have Zawgyi Myanmar Keyboard, you can chat with Myanmar Language. (Recommanded FF 1.0.5 version). Check it out [ Chat Creator ]
PS. I m not sure that site is banned or not. If, it is also banned. Cry again " Bullshit!"
Technorati Tags: Chat Creator
Posted by NLS at 6/26/2006 12:02:00 AM No comments:
Technorati Tags: Imagination, Creative
Posted by NLS at 6/25/2006 10:24:00 PM No comments:
Posted by NLS at 6/25/2006 08:52:00 AM No comments:
Posted by NLS at 6/25/2006 08:25:00 AM No comments:
ကြည့်ရင်း ကြည့်ရင်း အသည်း ယားလိုက်တာဗျာ။ လူတစ်ကိုယ် အကြောက် တစ်မျိုးပဲ။ လူ၊ သရဲ၊ တစေဿဆတွေ လုံးဝ မကြောက်ဘူး။ အဲဒီလို အကောင်တွေဆို သေအောင် ကြောက်တယ်။ အမုန်းဆုံး အကောင်က အိမ်မြှောင်နဲ့ ပိုးဟပ်။ အကြောက်ဆုံး အကောင်က ပေါက်ဖက်။ ကြည့်မရတဲ့ အကောင်က ကြွက်။ အသေးစိတ် ကြည့်ချင်ရင် ဒီနေရာမှာ အဲလို Macro ပုံတွေ ရှိတယ်။ သိမ်းထား ချင်တယ် ဆိုရင်ပေါ့။ [ Link ]
Posted by NLS at 6/24/2006 05:35:00 PM No comments:
Warning : Adult [18+]
အိမ်ဘေးမှာ ကျနေတဲ့ ငှက်ကလေး နှစ်ကောင်မှာ တစ်ကောင်က အပျံ တတ်သွားပြီဆိုတော့ တစ်ကောင်ပဲ ကျန်တော့တယ်။ အဲဒါကို ကြည့်နေရင်းနဲ့ ဘယ်တော့မှ မမေ့နိုင်တဲ့ ငှက်ကလေး ပုံပြင်ကို သွားသတိရတယ်။ ဆင်ဆာတော့ သိပ်မလွတ်ဘူးဗျာ။ ဒီတော့ ရိုးသားသူတွေ မဖတ်ကြနဲ့ဗျနှော့။ ကြိုပြောထားပါလေရဲ့။
တစ်ခါတုန်းက သားအဖ နှစ်ယောက် ရှိသတဲ့။ သမီးလေးက ၄ နှစ်လောက်ပဲ ရှိသေးတယ်။ တစ်နေ့တော့ သူတို့ သားအဖဟာ ကမ်းခြေမှာ ထွက်ပြီး လမ်းလျှောက် ကြသတဲ့။ အဖေ ဖြစ်သူက ဘောင်းဘီတိုလေးနဲ့ပေါ့။ သမီးက ပုစိကွေးလေး ဆိုတော့ လမ်းလျှောက်နေရင်းက လက်လှမ်းမီရာကို လက်ညှိုးထိုးပြီး- ဖေဖေ ဒါဘာလေးလဲဟင်လို့ မေးတယ်။ ဒီတော့ အဖေဖြစ်သူက အဲဒါ ငှက်ကလေးပေါ့ သမီးရယ်လို့ ပြန်ပြောတယ်။ ဒါဆိုရင် ငှက်ကလေး သမီးကို ပေးပါလား ဖေဖေရယ် သမီး ဆော့ချင်လို့ပါ ဆိုတော့ . မလုပ်နဲ့ သူက ငယ်သေးတယ် ပြီးတော့ ငှက်ဥလေးတွေ ကွဲသွားလိမ့်မယ်လို့ ပြောသတဲ့။ အဲဒီတော့ သမီး ဖြစ်သူက မကျေနပ် ပါဘူးတဲ့။ ဒီလိုနဲ့ ခဏနေတော့ သောင်ပြင်တစ်နေရာမှာ အဖေဖြစ်သူက ခဏအနားယူပြီး အိပ်လိုက်တယ်။ မကြာပါဘူး။ စူးစူးနစ်နစ် အှောသံ ကြားလို့ လူတွေ ပြေးလာ ကြတယ်။ အဲဒီမှာ ဒဏ်ရာ ဒဏ်ချက်တွေနဲ့ မေ့နေတဲ့ ဖခင်ဖြစ်သူကို တွေ့ကြရတယ်တဲ့။ အဲဒါနဲ့ ဆေးရုံ ပို့ပြီး ဘယ်လို ဖြစ်တာလည်း ဆိုတာ သမီးလေးကို ဝိုင်းမေးကြတယ်။ အဲဒီမှာ သမီးလေးက ဘာပြန်ပြောသလဲ ဆိုတော့
သမီးကို ဖေဖေက ငှက်ကလေးနဲ့ ပေးမဆော့ဘူးလေ။ အဲဒါနဲ့ ဖေဖေ အိပ်နေတုန်း ငှက်ကလေးကို သမီး ခိုးပြီး ဆော့တယ်။ သမီးက ငှက်ကလေးကို အသံမြည်ပြပါလို့ ပြောတာကို ငှက်ကလေးက အသံ မမြည်ဘူး။ အဲဒါနဲ့ သမီးလည်း စိတ်ဆိုးပြီး ငှက်ကလေး လည်ပင်းကို ညှစ်လိုက်တယ်တဲ့။ အဲလို ညှစ်ရလားဆိုပြီး ငှက်ကလေးက ခေါင်းထောင်ပြီး သမီးကို တံတွေးနဲ့ ထွေးတယ်လေ။ ဒါနဲ့ သမီးလည်း သူ့အမွှေးတွေ အကုန်လုံးကို ဖေ့ဖေ့ ဘောင်းဘီ အိတ်ထဲက မီးခြစ်နဲ့ မီးရှို့လိုက်တယ်။ နောက်ဆုံး မထူးပါဘူး ဆိုပြီး ဘေးနားက ကျောက်တုံးနဲ့ သူ့ ဥလေး တွေကိုပါ ထုခွဲ ပစ်လိုက်တာပေါ့လို့ ပြန်ပြောပါသတဲ့ဗျာ။ ဟားဟား။
ခင်ဗျားတို့လည်း ကမ်းခြေတွေဘာတွေ သွားမယ်ဆို ဒီကလေးမျိုး ဝေးဝေး ရှောင်ကြဗျို့။ ဒါမှမဟုတ် ငှက်မမွေးမိအောင် သတိထားပေါ့ဗျာ။ ဟားဟား။ တှောကြာ မီးမြှိုက် ခံနေရမယ်။
Technorati Tags: Nyi Lynn Seck, Myanmar Joke, Myanmar Blog
Posted by NLS at 6/24/2006 05:06:00 PM No comments:
Posted by NLS at 6/24/2006 03:40:00 PM No comments:
Posted by NLS at 6/24/2006 11:55:00 AM No comments:
Posted by NLS at 6/24/2006 11:36:00 AM No comments:
Posted by NLS at 6/24/2006 10:56:00 AM No comments:
Posted by NLS at 6/23/2006 08:50:00 PM No comments:
Posted by NLS at 6/23/2006 08:26:00 AM No comments:
Posted by NLS at 6/23/2006 07:20:00 AM No comments:
Posted by NLS at 6/22/2006 09:59:00 AM No comments:
Posted by NLS at 6/22/2006 09:12:00 AM3comments:
Posted by NLS at 6/22/2006 07:34:00 AM No comments:
Posted by NLS at 6/21/2006 07:05:00 PM2comments:
Posted by NLS at 6/21/2006 08:16:00 AM No comments:
ခုတလော စိတ်တွေ သိပ်မကောင်းဘူး။ တစ်ခုခုကို အှောပစ်လိုက် ချင်ပေမယ့် ငါ့စိတ်တွေက မွန်းကြပ်နေတယ်။ အှောလို့ မရဘူး။ မနက် ၁၁ နာရီမှာ အိပ်စက်ပြီး ညနေ ၇ နာရီမှာ အိပ်ယာထတယ်။ ဘောလုံးပွဲ ကြည့်တယ်။ တစ်ညလုံး ကွန်ပြူတာ လုပ်တယ်။ ဖိုတိုရှောပ့် ကျူတိုရီရယ်လ်တွေ အများကြီး လုပ်ဖြစ်တယ်။ ငါမသိသေးတာတွေ အများကြီး ရှိသေးတယ်။ ဆက်လုပ်ရမယ်။ ငါ့မျက်လုံးတွေက အိပ်ချင်နေတယ်။ ဒါပေမယ့် ငါ့ဦးနှောက်က အိပ်ခွင့် မပေးဘူး။ ဆက်လုပ်ရမယ်။ ငါမသိသေးတာတွေ အများကြီး ရှိသေးတယ်။ အိပ်ပစ်လိုက်ရင် တစ်ရက် ကုန်သွားမယ်။ ဒီလိုနဲ့ ငါ့အတွက့် ရက်တွေ တစ်ရက်ပြီး တစ်ရက် ကုန်သွားတယ်။ အရမ်း အိပ်ချင်လာတဲ့အခါ ကှောဖီသောက်တယ်။ ပြီးရင် ဆက်လုပ်တယ်။ တစ်ခါတစ်လေ ကျရင် ငါ ၂၄ နာရီပတ်လုံး ကုလားထိုင်ပှေါမှာ ရှိနေဖြစ်တယ်။ တစ်ခါတစ်ခါ ပင်ပန်းလွန်းပြီး အိပ်ပျှောသွားတယ်။ မိုးတွေကလည်း ခုတလော ရွာရွာနေတယ်။ ငါ့စိတ်ထဲမှာ အရာရာက လေးလံနေတယ်။ အိပ်ရမယ့် အချိန်တွေကို နှမြောတယ်။ ဆံပင်တွေက ရှည်ရှည်လာတယ်။ ဂစ်တာတီးတာ အသံတွေက ကြောင်နေတယ်။ ငါ့သီချင်း ကီးတွေကို ငါမေ့နေတယ်။ ငါ့အသံတွေက စီးကရက်ကြောင့် အရင်လို မကောင်းတော့။ ကဗျာတစ်ပုဒ် ကြိုးစား ရေးကြည့်တယ်။ ပြီးသွားတဲ့အခါ အရသာ မရှိလို့ အားလုံး ဖျက်ပစ်လိုက်တယ်။ ငါပြောတာကို နားလည်သူ ဘာလို့ မရှိခဲ့သလဲ။
Technorati Tags: Nyi Lynn Seck, Diary, Myanmar
Posted by NLS at 6/21/2006 08:00:00 AM No comments:
Posted by NLS at 6/20/2006 11:47:00 AM No comments:
Posted by NLS at 6/18/2006 03:49:00 AM No comments:
Posted by NLS at 6/18/2006 12:29:00 AM No comments:
Posted by NLS at 6/18/2006 12:08:00 AM No comments:
Posted by NLS at 6/17/2006 11:59:00 PM No comments:
Posted by NLS at 6/17/2006 10:09:00 AM No comments:
အလွန် စိတ်ဝင် စားစရာ ကောင်းတဲ့ တဲ့ ဝဘ်ဆိုဒ်လေး ဖြစ်ပါတယ်။ ရွှေ့လျားနေတဲ့ Target လေးတွေကို ထောက်ကြည့်မယ် ဆိုရင် သူနဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့ အရာတွေ ပှေါလာ ပါလိမ့်မယ်။ အနည်းဆုံး သူတို့ သုံးထားတဲ့ ဆန်းဆန်းပြားပြား အိုင်ဒီယာလေးတွေ တွေ့နိုင်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် Video Art [?] နဲ့ Ideology [?] ကို စိတ်ဝင်စားသူတွေ အကြိုက်တွေ့ နိုင်ပါတယ်။ ကျွန်တှော ကတော့ အဲဒီ ဆိုဒ်လေးကို ဖွင့်ပြီး သူတို့ရဲ့ Creativities ကို အားကျနေမိ ပါတော့တယ်။ [ Screenvader.Com ]
Technorati Tags: Video Art, Ideology, Myanmar Blog, Nyi Lynn Seck, Interesting
Posted by NLS at 6/17/2006 02:08:00 AM No comments:
Posted by NLS at 6/17/2006 01:31:00 AM No comments:
Posted by NLS at 6/16/2006 11:53:00 PM No comments:
Posted by NLS at 6/16/2006 06:00:00 AM No comments:
Posted by NLS at 6/16/2006 02:38:00 AM No comments:
AFI's 100 Years Choice
100 Heros & Villains
100 Film Scores
Read more detail here [ Link ]
Technorati Tags: Movies, Films, Top 100
Posted by NLS at 6/16/2006 02:20:00 AM No comments:
Posted by NLS at 6/15/2006 09:18:00 AM No comments:
Posted by NLS at 6/15/2006 07:29:00 AM No comments:
Posted by NLS at 6/15/2006 05:58:00 AM No comments:
Posted by NLS at 6/15/2006 05:15:00 AM No comments:
Posted by NLS at 6/15/2006 04:39:00 AM No comments:
Amazing seamless pictures! Surrealistic, Dreamatic, and very meaningful. You can see more pictures here. [Link] Do not forget to bookmark and grab them!
Technorati Tags: Nyi Lynn Seck, Seamless Pictures, Myanmar Blog
Posted by NLS at 6/15/2006 04:27:00 AM No comments: